Tababarka tooska ah ee Xirfadaha Samatabbixinta Degdegga ah
Bishii Juun 25, 2021, Shirkadda SIBO waxay u qabatay tababar xirfadaha samatabbixinta degdegga ah ee khadka tooska ah dhammaan shaqaalaha. Tababarkan, shaqaalaha SIBO waxay ku barteen qaar ka mid ah xirfadaha aasaasiga ah ee samatabbixinta xaaladaha degdegga ah aragti ahaan iyagoo si wada jir ah u daawanaya fiidiyowyada. Dhinac, waxaa la rajeynayaa in shaqaaluhu ay isku ilaalin karaan shaqada. Dhinaca kale, tani sidoo kale waa dariiqo muhiim ah oo lagu hubinayo wax soo saarka nabdoon ee SIBO.
Galabnimadii Juun 25-keedii, shaqaalaha SIBO waxay si wada jir ah u joojiyeen shaqadooda, qof kastoo shaqaale ahna wuxuu naftiisa u huray barashada aqoonta daryeelka degdegga ah. Waqtigaan, iyada oo loo marayo koorsada, aqoonta iyo xirfadaha ku caanbaxa badbaadinta shoogga korantada iyo dib u soo nooleynta wadnaha, hababka daaweynta caafimaadka ee dhacdooyinka, iwm. Jawiga saxda ah ee samatabbixinta, mabaadi'da samatabbixinta, iyo tallaabooyinka degdegga ah ee xaaladaha degdegga ah ayaa sidoo kale lagu sharraxay.
Shirkadda SIBO waxay rajeyneysaa in shaqaale kasta uu si dhab ah u qaadan karo tababarkan. Tababarkanna, tababarteyaashu waa inay lahaadaan garasho adag oo ah aqoonta iyo xirfadaha gargaarka degdegga ah si ay si fiican ugu ilaashadaan ammaankooda una horumariyaan wax soo saar aamin ah mustaqbalka. Waxa kale oo ay rajeyneysaa in la wanaajiyo is-ilaalinta iyo awoodda baxsashada degdegga ah ee shaqaale kasta, in si wanaagsan loo fuliyo is-badbaadinta iyo isku-samatabbixinta haddii shil dhaco, in la yareeyo silica dhaawacyada, loona dagaallamo waqtiga daaweynta, taas hoos u dhigida heerka naafonimada, yaraynta heerka dhimashada, iyo ilaalinta shaqaalaha inta ugu badan. Nolol iyo caafimaad.
Tababarkan, qof kasta oo shaqaale ah oo ka tirsan SIBO wuxuu bartay waxyaabaha muhiimka u ah gargaarka degdegga ah. Mustaqbalka shaqada iyo nolosha, shaqaalaha SIBO waxay isticmaali karaan aqoonta gargaarka degdegga ah iyo xirfadaha ay barteen si ay u fuliyaan is-badbaadin iyo is-samatabbixin labada dhinac ah. Tallaabada xigta, shirkaddu waxay sii wadi doontaa kordhinta tababbarka samatabbixinta xaaladaha degdegga ah, waxay si wax ku ool ah u hagaajineysaa is-caawinta iyo awoodaha isku-samatabbixinta ee shaqaalaha, iyo inay abuuraan jawi iswaafajin iyo badbaado leh Isla mar ahaantaana, waxaan siin doonnaa macaamiisheenna wax soo saar wanaagsan oo ka shaqeeya jawi nabadgelyo leh.
Waqtiga dhejinta: Jul-08-2021